Adss Cable Guy misaintsaina Manufacturers sy Suppliers | China Adss Cable Guy misaintsaina Factory
ADSS maty-end mafy ampiasaina amin'ny tsato-kazo na vy tilikambo tany fananganana tambajotra amin'ny fifandraisan-davitra fizarana fibre optic ADSS amin'ny telegrama.
ADSS tariby deadend misaintsaina tafo dia vita amin'ny vy, miafina ao amin'ny fasika manokana sosona sy lakaoly.
Matetika napetraka amin'ny plastika palitao ambony fibre optic ADSS telegrama, aza mitaky na fitaovana. Niteraka, fisaka, isa 8 tariby tsy tokony nahazoana ity karazana preformed helical tsara.
Jera preformed pamokarana dia afaka hanitsy tariby maty niforona faran'ny araka ny angon-drakitra mpanjifa taratasy 'tariby. Rehefa ny fihenjanana hery dia avo, dia tokony ampiharina helical ADSS splice mafy amin'ny mpiaro mba hiarovana fibre fototra amin'ny manimba mandritra tensioning. Tandrifiny ho azy, dia azo ampiharina ADSS preformed tariby mafy tsy misy mpiaro, raha ny fihenjanana eo ambany 9 kn, miaraka thimble na tsy misy azy io.
Jera manana ny fizahan-toetra feno fitaovana isan-karazany mba miroso ny karazana fitsapana ny heliformed maty avy helical faran'ny andalana vokatra isan-karazany.
Isika mifantoka amin'ny toetra sy feno isan-karazany ny vy namorona misaintsaina, izay ahitana: maty-end lehilahy misaintsaina, fampiatoana misaintsaina, lafiny fifandraisana, kambana fifandraisana, insulator ambony fifandraisana, fiadiana hazo, feno fihenjanana splices, casted thimbles, pole Fittings (vatofantsika gadra , baolina maso), mihetsika fanaraha-maso damper sns
ADSS tariby lehilahy grip JS